ကော်ဖီတစ် Turk ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ရှေးဟောငျးအီဂအရှေ့ဉာဏ်ပညာကို says: "ဒီကော်ဖီ, ညဉ့်ကဲ့သို့အနက်ရောင်ပူပြင်းတဲ့မြင်းကဲ့သို့၎င်း, တစ်ဦးနမ်းကဲ့သို့ချိုဖြစ်သင့်သည်။ " သို့သော်ဤညျခှနျအားဤအရည်အသွေးတွေကိုအဘယ်သူအားမျှနှင့်သောက်ကကော်ဖီစက်တစ်ခုသို့မဟုတ်သမားရိုးကျသတ္တုခွက်ထဲမှာချက်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်လျှင်ခံစားရရန်မဖြစ်နိုင်တစ်အင်အားသုံးပေးသည်။ ဒါဟာကော်ဖီသာ Turk နှင့်အခြားအလျှင်းမရရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တူရကီကော်ဖီ၏ရွေးချယ်မှု - လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ၎င်းလျှို့ဝှက်ချက်များ, လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ယနေ့ဆောင်းပါးဖော်ပြပါ။
ကော်ဖီတစ် Turk ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လို: ပုံသဏ္ဍာန်, ပစ္စည်းပမာဏ
ဒါကြောင့်သင်မည်သို့ပထမဦးဆုံးဌာန၌အဘို့အကြည့်ဖို့ဘာကော်ဖီအဘို့အညာဘက် Turk ကိုရှေးခယျြပါသနည်း တကယ်တော့ဒီမှာအဓိကရှုထောင့်အညီအမျှအရေးကြီးလှသည်အားလုံးအဘယ်သူကိုသုံးခုဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအကောငျ့ကိုသူတို့ထဲကအနည်းဆုံးသို့ယူမထားဘူးဆိုရင်, အလုပ်ရှိသမျှတို့သည်ယိုစီးဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောရှုထောင့်အမျိုးအစားကဘာလဲ? အသွင်သဏ္ဌာန်, အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ပစ္စည်း။ ယခုမှာအသီးအသီးကို item ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို။
ပထမဦးစွာပုံသဏ္ဍာန်။ Turk - လမ်းဖြင့်, ထိုတူရကီသူတို့ကိုယ်သူတို့, ဒီသင်္ဘောကိုအိုးဟုခေါ်သည် - ထိပ်ဆုံးတစ်ကန်တော့ချွန်နဲ့ဆင်တူဖြစ်သင့်သည်။ ထို့အပြင်အောက်ခြေမျှမျှတတကျယ်ပြန့်မှုရှိရမည်, ရေသွန်းလောင်းသောမှတဆင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်မြေပြင်ကော်ဖီအသေးစားနှငျ့ဆနျ့ကငျြ၌ထည့်သွင်းထားသည်။ ကျယ်ပြန့်အောက်ခြေကြွက်ကြွက်ဆူသောအရှိန်အဟုန်မြှင့်နှင့်ရေမြှုပ်နှင့်အတူပိတျဆို့နတေဲ့သေးငယ်တဲ့အပေါက်, ကော်ဖီအနံ့အငွေ့ပျံဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေပါလိမ့်မယ်။
အခုတော့ volumes ကိုအကြောင်းကို။ စံပြ Turk ကော်ဖီတစ်ရုံတစျခုခွက်ကိုလိုက်လျောညီထွေရှိရပါမည်။ ဤသည်အများဆုံးမွှေးကြိုင်နှင့်ပြည့်ရရှိသောအဖျော်ယမကာများ၏အသံအတိုးအကျယ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အညီ, နောက်ဆုံးတော့သည်ပစ္စည်းများအကြောင်းကို။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုရွှံ့, ကြွေထည်နှင့်သတ္တု၏အိုးသို့ခွဲခြားထားတယ်။ ယင်းသတ္တုကြေးနီ, ငွေ, အစားအစာလူမီနီယံနှင့်သံမဏိကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါပစ္စည်းများတစ်ခုချင်းစီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကောင်းအဆိုး cons ရှိပါတယ်, အခုကျနော်တို့ကမျက်နှာက၌ရှိကြ၏။
ရွေးချယ်ဖို့ပိုကောင်းဘယ်အရာကို Turk ပါသလဲ
ဒါကြောင့်အဘယျသို့ပိုကောင်းတဲ့ Turk ရွေးချယ်ဖို့ခေတ်သစ်သတ္တုလှပသောကြွေ, ဒါမှမဟုတ်ရှေးဟောင်းတူရကီ, ရွှံ့ကဲ့သို့? ဒါဟာအားလုံးသင့်ရဲ့အရသာနဲ့ဦးစားပေးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သငျသညျအခြို့မျိုးနှင့်ကော်ဖီအမျိုးအစားကိုကြိုက်လားလျှင်, ရွှံ့ရွေးချယ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။ ၎င်း၏အပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာသောက်အောက်စီဂျင်ပြည့်နေပါသည်။ အဘယ်သူစုပ်, ပြီးတော့နံရံ၏အရသာကိုပေးနိုင်ပါသည်သာအရသာတိုးတက်လာဖို့တစ်ဦးချင်းစီသစ်ကိုချက်ပြုတ်နှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏လူတန်းစားကိုပြောင်းလဲလိုပေမယ့်ဟင်းလျာများ၏ကြင်နာအရှုံးမပေးချင်ဘူးဆိုရငျ, ကြွေထည်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ကြွေအိုးရွှံ့ထက်ပိုဆိုးသည်မဟုတ်, မှတပါး, သူတို့က clean ရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့အနံ့ကိုစုပ်ယူပါဘူး။ ဤတွင်ရုံနှင့်ရွှံ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မခိုင်မြဲပုံ - ကြွေတူရကီတဦးတည်းအားနည်းချက်ရှိသည်။
နေ့စဉ်အသုံးပြုအများဆုံး - သို့သော်သတ္တုတူရကီနှင့်အနံ့ကိုစုပ်ယူ, သူတို့အဘို့အဂရုစိုက်ရိုးရှင်းသောဖြစ်တယ်, မတိုက်ကြပါဘူး။ လူအပေါင်းတို့သည်သတ္တုတူရကီကိုအကောင်းဆုံးကြေးနီဆင်ခြင်၏။ သူတို့ကအပူကောင်းစွာနဲ့အညီအမျှအပူလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ကော်ဖီသူတို့တစ်တွေရွှံ့ Cezve အတွက်ထက်မဆိုးရွားလုပ်ပါ။
ဤတွင်, ဖြစ်ကောင်း, လက်ျာကော်ဖီ Turk ကိုရှေးခယျြဖို့ဘယ်လိုအပေါငျးတို့သလျှို့ဝှက်ချက်များ။ ကိုယ့ option ကိုတွေ့ပါပြီးသောက်ရတာကိုနှစ်သက်ကြတယ်။
LED လမ်းပေါ်မှာပန်းကုံး "အရည်ပျော်တံစကျမွိတျရခေဲခြောငျး"
မြေအောက်ခန်းမှမီးခိုး signal ကို
ပေါ်လီမာရွှံ့များအတွက် Tools များ
ညစာ set ကို
ယင်းနားကြပ်ကို fix လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အမျိုးသမီးများနေ့ကို T-Shirt တိုးချဲ့
လုံးဝမီးဖို၌ flounder ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဗီတာမင် D ကိုမရှိခြင်း
အိန်ဂျလီနာဂျိုလီ Disneyland အတွက်မွေးနေ့ Vivienne နှင့် Knox ကျင်းပ
ကလေးများအတွက်ချုပ် -2လတာ
Minced အသား Patti
လှောင်အိမ်ပြန်ဖက်ရှင်အတွက်ဖြစ်ပါသည်: Melania Trump2ကွဲပြားခြားနားသောလက်ရှိပုံရိပ်ကိုပြသ
Wheatgrass ၏အမြစ် - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications
ရင်သားကင်ဆာဓာတ်လှေကား - အဆင်းလှသောတွေဆီကနေများအတွက်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများ